Mikasa ny dia: 1.- Ny sidina mankany Azia. | Vaovao momba ny dia
Travel asia | | Bangkok, mpitarika, Hong Kong, Kuala Lumpur, Fitsangatsanganana any Azia, Flights
1.- Ho an'ny mpandeha tsy miankina dia tsy maninona ny seranam-piaramanidina fahatongavana.
Mazava fa rehefa avy nanapa-kevitra ny datin'ny fialantsasatra ny zavatra voalohany dia ny mitady tapakila fiaramanidina. Raha tsy hoe voafetra ny fotoana ananantsika, dia matetika isika tsy miraharaha izay toerana halehany amin'ity tapakila ity fa mitady sidina mankany Azia atsimo atsinanana izay ahazoanay tombony. Tsy maninona na tsia Bangkok, Kuala Lumpur, Hong Kong o SingaporeAvy amin'ireo renivohitra 4 ireo dia mora ny manidina any amin'ny toeran-kafa amin'ny vidiny mifaninana amin'ny ambany vidiny Aziatika (izay mbola betsaka kokoa aza ambany vidiny noho ny an'ny eropeana), ary amin'ny tranga rehetra, na dia tsy isaina aza ireo mpitsikilo, dia mendrika izany tanàna izany a fijanonana (fijanonana an-dalana).
Misafidy ny hanitatra ny dia araka izay azo atao foana aho. Ny ampahany lafo indrindra amin'ny dia mankany Azia atsimo atsinanana dia ny sidina, ny fijanonana dia mety ho mora vidy tokoa, ka mendrika ny manararaotra ny dia sy mandany andro maromaro. Ny fitsangatsanganana latsaky ny 1 herinandro dia tsy azo tanterahina, efa very 1 andro indray mandeha ianao ary iray hafa miverina, ampio ny jetlag dia tsy mandoa izany. 15 andro dia tsara, saingy tsy mahomby izy io, satria noho ny fahatsorana ny fivezivezena manodidina ilay faritra dia maniry foana ny hitsidika toeran-kafa iray ianao, na handany andro maromaro miala sasatra eny amoron-dranomasina paradisa. Rehefa afaka 3 herinandro dia lasa mahaliana ny zavatra.
Seranam-piaramanidina maro no mankany Bangkok, Singapore, Hong Kong y Kuala Lumpur, avy amin'ny azy manokana toa Thai Airways, Singapore Air, Cathay Pacific o Seranam-piaramanidina Maleziana, na ny eropeana aza toa Lufthansa, KLM, Air France, British Airways… Tsy misy farany ny lisitra. Amin'ny safidy maro dia tsara kokoa ny mankany Trabber na motera fikarohana sidina hafa, izay hanolotra anay ny taha tsara indrindra hahatongavana.
Raha manambatra sasantsasany ianao amin'ny andro fiainganana sy fiverenana, amin'ny alàlan'ny fanamorana ao amin'ny seranam-piaramanidina fidirana ao Azia atsimo atsinanana, ary omena ny zotram-piaramanidina marobe izay manolotra ireo toerana itodiana ireo, dia mora ny mahazo ny tahan'ny fifaninanana. Mba hanomezana hevitra anao, raha manodidina ny € 1.000 ny tahan'ny mpizahatany ara-dalàna dia azo atao ny mahazo ny sidina na dia manodidina ny € 500 aza.
2.- Ny fandraisam-bahiny aziatika hatramin'ny voalohany, ny tsara kokoa.
Lava ny sidina (10 ka hatramin'ny 14 ora) ary miankina amin'ny fomba maivanao fatorianao izany dia mety hampijaliana. Ka ny fisafidianana zotram-piaramanidina tsara dia mety hitondra fiovana. Aza atao ny zotram-piaramanidina toy ny Tiorka na Aeroflot, mora vidy izy ireo, nefa tsy mahazo aina.
Gaga ny Espaniola matetika amin'ny salan'isan'ny seranam-piaramanidina Azia atsimo atsinanana. Fa tsara lavitra ny manidina miaraka aminy Singapore manidina miaraka Lufthansa, ohatra. Tsy milaza izany aho Lufthansa Seranam-piaramanidina ratsy izy io, ny aziatika ihany no mialoha dingana voalohany raha ny amin'ny fandraisana vahiny. Singapore y Cathay dia miaraka amin'ireo kaompaniam-pitantanan'ny Emira Arabo ny tsara indrindra eto an-tany. Mahaliana tokoa ny mifidy iray amin'izy ireo.
Safidy hafa koa io, fa tsy hijanona eo Amsterdam, Frankfurt na London, azonao atao ve ny manidina amin'ny alàlan'ny Emirates ary manamboatra a fijanonana en Dubai. Te hanao izany foana aho. Ary mihoatra ny mety ho vidiny tokoa izany Singapore fa ny Kuala Lumpur, samy manana fifandraisana maro.
3.- Manidina amin'ny raharaham-barotra ... antenaina!
Raha fampiononana no tadiavinao, safidy iray ny manidina amin'ny raharaham-barotra ... ary tsia, tsy manao vazivazy aho. Na dia mora mitentina € 8.000 € aza ny tapakilan'i Madrid - Singapore avy any Singapore Air, dia azo atao ny mahita tolotra mifaninana, raha tsy takatry. Tsy handany vola aminao velively ny fandehanana amin'ny mpizahatany, fa mety afaka manidina ianao raharaham-barotra avo roa heny noho ny antony fizahanao mpizahatany.
Thai, Cathay na Singapore Matetika izy ireo dia mandray tolotra 2 × 1 amin'ny fahavaratra ary indraindray azo ampiana fihenam-bidy tsara izany. Amin'ireto tolotra ireto dia azo atao ny manidina amin'ny raharaham-barotra amin'ny € 2.000 fotsiny. Raha mbola tsy nanao raharaham-barotra ianao dia matokia ahy, mandoa be ny olona amin'ny zavatra iray. Amin'ny vanim-potoana sasany ary raha matavy loatra ianao na lehibe kokoa, dia afaka mandoa izany. Miresaka seza malefaka isika, izay mitanina 180º ary mijanona ho toy ny fandriana ary mamela ny voaloko indrindra hatory mandritra ny dia manontolo ary ho tonga amin'ny toerana halehany toy ny raozy.
4.- World Travel Plus: ny raharahan'ny mahantra, na ny fizahantany an'ny manan-karena.
Safidy iray hafa, antsasaky ny bizina sy ny fizahan-tany no kilasy British Airways World Traveller Plus. Tsy mahatratra ny tena mampionona ny kilasy fandraharahana, fa ahazoana aina bebe kokoa noho ny fizahan-tany ary lafo ihany. Mba hanomezana hevitra anao, amin'ny 747 amin'ny toekarena dia misy seza 3 eo amin'ny laharana eo an-daniny, noho izany dia mifarana amin'ny mpiara-miasa aminao foana ianao amin'ny lafiny iray ary labiera aostralianina misotro be amin'ny lafiny iray. Amin'ny Traveller Plus Seza 2 lehibe kokoa ihany no mandeha. Ary eo afovoany dia misy seza mitovy 2 tsiroaroa. Mivelatra kokoa ny seza, misaraka kokoa izy ireo (17cm mihoatra ny mpizahatany) ary mizotra betsaka kokoa izy ireo.
Nanandrana izahay tamin'ny fahavaratra ary hoy ny teny filamatra, mendrika ny fahasamihafana (mendrika ny mahasamihafa azy… amin'ny vidiny).
Virgin Atlantic manana kilasy mitovy amin'izany ary manolotra sidina mankany Shanghai y Hong Kong.
Amin'ny fizarana manaraka dia hojereko ny vidiny ambany any Azia atsimo atsinanana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Bangkok » Mikasa ny dia: 1.- Ny sidina mankany Azia.